Ajụjụ - Zaili Engineering Machinery Co., Ltd.
You bụ onye nrụpụta ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa?
Anyị bụ ndị a n'ezie emeputa, zaili ewu ígwè co., Ltd. e guzobere na 2012.
Nwere ike ịmepụta ndị na-agbaji dịka atụmatụ ndị ahịa si dị?
Ee, OEM / ODM ọrụ dị. Anyị bụ ndị ọkachamara emeputa maka afọ 15 na China.
Gịnị bụ MOQ na usoro ịkwụ ụgwọ?
MOQ bụ 1 set. A nabatara ịkwụ ụgwọ site na T / T, L / C, Western Union, enwere ike ịmekọrịta okwu ndị ọzọ.
7-10 na-arụ ọrụ ụbọchị megide iji ibu
Banyere Mgbe erechara ya
14 ọnwa ikike maka ndị na-emebi hydraulic megide ụgwọ nke ụbọchị nkwụnye ụgwọ. 24-hour ozugbo mgbe-sales ọrụ izute gị chọrọ.
Kedu otu ị ga-esi nwalee ihe mmebi tupu nnyefe
Onye ọ bụla na-emebi ụgbọ mmiri ga-enwe mmetụta nyocha tupu ire ere.
Kedu mba ị na-enye ndị na-emebi ụgbọ mmiri gị?
A na-ere ndị na-emebi ụgbọ mmiri anyị karịa mba 30 n'ụwa gụnyere America, Europe Australia, ndịda ọwụwa anyanwụ Asia na Africa.
Enwere m ike ịtụ ahịa oge mbụ na akara nke m?
Ee, anyị na-enye OEM service.You nwere ike izipu anyị gị logo ma ọ bụ ika aha, anyị ga-Nlụpụta ya.
E nwere ọtụtụ ọnụ ala hama na ahịa àjà ogologo akwụkwọ ikike. Gịnị kpatara nke a ma ị nwere ike ịnye m ụdị hama ahụ?
Eeh, anyị na-enye kwa hama ndị ahụ. Akwụkwọ ikike dị ogologo bụ ọkachasị anya gimmick na-adọrọ adọrọ. Mgbatị a gbatịrị agbatị na-ekpuchi naanị akụkụ ndị ahụ anaghị ada ada ọtụtụ afọ. Ndị dị ọnụ ala karịa, ọ bụghị ezigbo mma hama na-enyekarị gimmick warranties. Nakwa ikike dị oke ala bara uru, ọtụtụ ụdị dị ọnụ ala na-eme ka ike gwụ ft ft lbs nke hama ha. Dị ka iwu zuru oke na ọtụtụ ihe, ọ bụrụ na ọnụahịa dị ọnụ ala karịa ka ọ dị mma!
Ihe niile bụ ihe mgbagwoju anya. Kedu hamma m chọrọ? Kedu udi ike m choro? O juchaala ya. Kedu hamma m chọrọ? Kedụ ike ike m chọrọ?
Gwa anyị ihe niile gbasara onye na-ebu gị, ngwa ọrụ a na-ahụkarị, oge awa a na-atụ anya iji kwa afọ na mmefu ego gị ma anyị ga-akwado ma belata ụdị dị iche iche na nhọrọ maka ịhọrọ.
Mgbe ị na-aguputa m maka hama gịnị ka nke a na-agụnye?
anyị ga-agwakarị gị ọnụahịa ngwugwu nke gụnyere: haịdrọlik hama, ngwa ọrụ ọhụrụ abụọ, hoses abụọ, ihe ntinye arịọnụ, ntanye na ngwa ohia, karama nitrogen, ngwa akara, ihe nkwụnye ụgwọ. Anyị ga-edozi ihe niile n'ụzọ doro anya na ire ere. Enweghị ihe mgbakwunye zoro ezo.
Azụrụ m hama n'aka onye na-ere ahịa nke na-ere ụdị ngwá ọrụ ụwa niile ma ugbu a anaghị m enweta enyemaka ma ọ bụ nkwado ọ bụla. Kedu ihe m nwere ike ịme?
Nke a bụ nsogbu nkịtị. Ọ bụrụ na ịnweghị nkwado ị chọrọ n'ihi na isi ahịa onye ahịa gị abụghị hama ma ọ bụ ikekwe ọ maghị azịza nye ajụjụ gị, biko nweere onwe gị ịkpọ anyị. Anyị enweghị ike ịkwado gị na anyị nwere ike inyere gị aka, mana ọ bụrụ na anyị nwere ike, anyị ga-enyere gị aka n'agbanyeghị agbanyeghị. Anyị achọghị ịma ebe ị zụtara hama gị. Ọ bụrụ na ị rapaara ma chọọ enyemaka, kpọọ anyị. Kwesighi ịzụta ihe ọ bụla n'aka anyị iji nweta enyemaka n'aka anyị. Ọ bụrụ na anyị nwere ike inyere anyị aka.
Enwere m hama m zụtara eji ọzọ. Amaghị m ihe ika ọ bụ? Enwere m nsogbu na ya, gịnị ka m nwere ike ịme? Kedu ka m ga-esi nweta akụkụ ya? Ị nwere ike ị nyere m aka?
Ee, kpọọ anyị ma nye anyị ọtụtụ ozi dịka ị nwere ike. Anyị enweghị ike ikwe nkwa nsonaazụ dị mma n'oge ọ bụla mana anyị ga-eme ike anyị niile iji mata gị hama. Biko zitere anyị foto nke hama gị, yana ọnụọgụ ọ bụla zọọ na ya. Nke a ga - enyere anyị aka ịmata kọmịị gị nke ọma.
Pulverizer N'ihi Excavator, Crusher N'ihi Excavator, Shiee N'ihi Excavator, Hb Series emebi, Mkpọrọ Mkpọrọ Mkpọrọ, Control valvụ N'ihi emebi,